Soft ချိတ်ပိတ်အနားကွပ် Butterfly က Valve
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Soft ချိတ်ပိတ်အနားကွပ် Butterfly က Valve(24 များအတွက်စုစုပေါင်း Soft ချိတ်ပိတ်အနားကွပ် Butterfly က Valve ထုတ်ကုန်များ)
Soft ချိတ်ပိတ်အနားကွပ် Butterfly က Valve - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Soft ချိတ်ပိတ်အနားကွပ် Butterfly က Valve ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Soft ချိတ်ပိတ်အနားကွပ် Butterfly က Valve / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Soft ချိတ်ပိတ်အနားကွပ် Butterfly က Valve များထဲမှ Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. ။
tag ကို: flat Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင် , Trapezoid Dedusting လေ့လာကြရအောင် , နွေဦး Dedusting လေ့လာကြရအောင်
ဖုန်မှုန့်အရိုးစု၏မှုန်ရေမွှားပန်းချီသုံးခုခြေလှမ်းများ အိတ် filter ကို၏အရိုးစုအမျှမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု၏အရည်အသွေး Self-ထငျရှားပါသညျ။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကျနော်တို့ကဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်မလဲ?...
စက်ရုံ 140mm ဖုန်မှုန့်အိတ် Net ကထောင့်ကွက်
tag ကို: Venturi ရဲ့ဖုန် Bag နှင့်အတူ filter ကေ့ , Deduster ပံ့ပိုးမှုကေ့ , စက်ရုံလုပ် Filter ကိုအိတ်ကေ့
အရိုးစုပူးတွဲဖယ်ရှားမြေမှုန့်အလင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်အဆင်ပြေဖြစ်ပြီး, frame ရဲ့အရည်အသွေးကိုတိုက်ရိုက် filter ကိုအိတ်၏ filtering ကိုပြည်နယ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဘဝသက်ရောက်သည်။ အဆိုပါ electrostatic...
အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး Frame က
tag ကို: Blower များအတွက် round Filter ကိုအိတ်ကေ့ , Air ကို Filter ကိုဖုန် Bag , Organosilicon ဝတ် Bag
ကုန်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များ မြေမှုန့် filter ကိုအိတ်မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အဓိကပန်ကာဒလေပြင်းဖိအားဖြတ်သန်းနိုင်အောင်သွပ်ရည်စိမ်ဖုန်မှုန့်အရိုးစုနှင့် filter ကိုအိတ်၏မျက်နှာပြင်, အမာရွတ်များ, ပြန်တယ်နှင့် burrs welding...
စက်ရုံ 140mm ဖုန်မှုန့်အိတ် Net ကထောင့်ကွက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး Frame က အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Soft ချိတ်ပိတ်အနားကွပ် Butterfly က Valve from China, Need to find cheap Soft ချိတ်ပိတ်အနားကွပ် Butterfly က Valve as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Soft ချိတ်ပိတ်အနားကွပ် Butterfly က Valve produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Soft ချိတ်ပိတ်အနားကွပ် Butterfly က Valve, We'll reply you in fastest.